ဧပရယ်လ်ပူး @ ပူးတေ: မြိန်ရာ ဟင်းကောင်း
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 8:00 PM
ဧည့်သည် သွားလုပ်ရင် ကောင်းမယ်နဲ့ တူတယ်။
me 2. I als feel extremely head-ach after having the food with MSG much. Fresh lime juice(very sour) make me feelalittle bit better.
ဟင်းကောင်းလေးတွေ အားပေးသွားတယ် ပူးတေရေ။
ထမင်းဝိုင်းလေးက စားချင်စဖွယ်တွေပဲနော်း)
မမတို့လည်း အဲလို သခွားသီးသုပ် အရမ်းကြိုက်တယ် အားလုံး စားချင်စရာ ကြာဇံအကြမ်းချက် ကလေး နဲ့ မြိန်မြိန် စားသွားတယ် ညီမရေ
ပကာသန မပါတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထမင်းဝိုင်းလေးကို တကယ်ပဲ သွားရည်ကျသွား ခဲ့ပါတယ်ဗျာ...။